अख्तियारमा दुईजनाको लडाई, प्रधानमन्त्रीको रोजाई को ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अख्तियारमा दुईजनाको लडाई, प्रधानमन्त्रीको रोजाई को ?
संवैधानिक परिषद्ले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । उता, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पद चार महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको छ । आयोगमा नवीन घिमिरे कामु प्रमुख आयुक्त छन् । आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा घिमिरे नै प्रमुख दाबेदार रहेको चर्चा भएपनि अहिले तीन जनाको नाम बाहिर आएको छ ।
तर, राईका लागि प्रमुख आयुक्त पद नसुहाउने टिप्पणी हुन थालेको छ । राईकै कारण आजसम्म पनि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट भर्खरै राजीनामा दिएका गोपाल खड्काको भ्रष्टाचार छानविन हुन सकिरहेको छैन । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक